Tag: Farsamada/Internetka | Martech Zone
Tag: Teknolojiyada / Internetka
Waa tan sababta ay dadku u Neceb yihiin Mawduucaaga
Talaado, Oktoobar 21, 2014 Douglas Karr
Shabakadda ayaa la inkiri karin inay tahay ilo muhiim ah oo macluumaad u ah dhagaystayaasha oo dhan waxaana muhiim ah in la hubiyo inay tahay mid wax ku ool ah oo saameyn ku leh dadka iyo ganacsiyada inay ku dadaalaan. Kacaanka dijitaalka ah ayaa dalbaya. Websaydhyadu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo gaar ah, oo khuseeya oo cusub oo nuxur ahaan isla markiiba u baahan inay ku mashquuliyaan akhristaha. Mawduucu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid fiiqan, wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid soo jiidasho leh oo u baahan in la caddeeyo. Maaha in la sii wado; waa hogaamin
Axad, Oktoobar 30, 2005 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr